Fantatro fa mijaly amin’ny tsy fisian’ny rano fisotro madio ianareo. Handefa fitaovana manokana aho hanamboarana paompin-drano aty Ejeda. Henoko ihany koa fa mijaly herinaratra sy ny tsy fandriampahalemana ianareo, aza manahy ry vahoakan’i Ejeda fa hanampy anareo aho. Mahaiza mifidy amin’ny 19 desambra izao ry malagasy namako !
HIPETRAKA HO VAHAOLANA HO AN’NY FIRENENA AHO.
Lehibe loatra ny fitiavana nasehonareo ahy teto Bekily. Mino sy manantena aho fa hanampy ahy ianareo amin’ny 19 desambra izao, ahafahantsika manova ny tantara. Tsy tonga tanam-polo anefa aho fa nitondra fanomezana ho an’ny fiangonana Loterana teto an-toerana amin’ny maha kristianina ahy. Lehibe ihany koa ny fitiavako anareo.
TSY MAINTSY MANDRESY ISIKA.
Tsy ho gisitra intsony i Madagasikara rehefa lany filoha aho. Fantatro ary hitako avokoa ny olanareo eto Tsihombe. Tsihombe ihany koa dia ataoko misitrika ny fampandrosoana. Hiady amin’ny tsy fandriampahalemana isika, hiadiana tsy fanjarian-tsakafo, hiady amin’ny fahantrana.
IZAHO DIA HITONDRA HAZAVANA HO AN’I MADAGASIKARA
Tsy maintsy ho aringantsika sy ho foanantsika ny asan-dahalo. Hametraka "régiment spécial" na vondron-tafika manokana eto Betroka aho. Ary angidim-by no hapetrako eto mandavan-taona. Ampio aho ahafahako manatanteraka ny fanirianareo.
Tsy maintsy hamboarintsika ny tohodranon’i Dabara, izay nampijaly anareo an-taonany maro. Tsapako ary hitako ny fijalianareo mponina amin’ny tsy fandriampahalemana. Aza matahotra fa efa manana paik’ady hiadina amin’izany aho.Lehibe ny fitiavako anareo eto Mahabo.